आज मात्रै २०२० जनामा सँक्रमण, थप ७ को मृत्यु | Beauty News Nepal
By Beauty News Nepal	 On Sep 18, 2020
नेपालमा आज शुक्रबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना सँक्रमित भेटिएका छन् । आज मात्र नेपालमा २ हजार २० जनामा कोरोना सँक्रमण देखिएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा देशभरका ल्याबमा ११ हजार ४५८ जनाको स्वाब गरिएको परिक्षणमा २ हजार २० जनामा कोरोना पुष्टी भएको छ ।
आज काठमाडौं उपत्यकामा ८५९ जनामा कोरोना सँक्रमण देखिएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च सँख्या होे । जसमा काठमाडौंमा ६९८ जना, ललितपुरमा ७९ जना र भक्तपुरमा ८२ जना सँक्रमित पुष्टी भएको पनि डा. गौतमले बताएका छन् ।
यो सँगै नेपालमा सँक्रमित ६१ हजार नाघेका छन् । हालसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या ६१ हजार ५९३ जना पुगेको पनि डा. गौतमले बताए । नेपालमा आज १७ हजार ३८३ जना आईसोलेसनमा रहेको पनि डा. गौतमले बताए । हाल देशभरमा क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या ७ हजार ७३६ जना रहेको पनि डा. गौतमले बताए ।
पछिल्लो २४ घन्टामा देशका विभिन्न जिल्लामा गरी ८७१ जना कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । हालसम्म नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या ४३ हजार ८२० पुगेका डा. गौतमले बताएका छन् ।
यस्तै कोरोना सँक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टमा देशभरमा थप ७ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना सँक्रमणबाटमृत्युहुनेको सँख्या ३९० जना पुगेको पनि डा. गौतमले बताएका छन् । मृतकहरुमा ५ जना पुरुष र २ जना महिला रहेको छन् । मृतक पुरुषहरुमा मोरङका २, काठमाडौंका १, भक्तपुरका १ र नवलपरासीका १ जना रहेका छन् । यस्तै मृतक महिलामा काठमाडौंका १ जना र ललितपुरका १ जना रहेका छन् ।
शिल्पा रोएपछि केकी अधिकारीको यस्तो स्टाटस
सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्डका मनोनयनलाई प्रमाणपत्र, यस्तो छ…
मिस्टर एण्ड मिस एसईई अफ द इयरमा ३३ युवा युवती
गीता खत्रीको प्रेम दिवस
सिरिरी सिरिरी…भन्दै स्मिता र राजनराज